Arcane Legends MMO-Action RPG 2.4.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.4.1 လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Arcane Legends MMO-Action RPG
Arcane Legends MMO-Action RPG ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
~ NEW ~ Player ကိုအိမ်ရာစနစ်က - Arlor ၏သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းနည်းအပိုင်းအစရ!
~ NEW ~ ပေ Animation သည့်စနစ် - တစ်ခုတည်းအင်အားကြီးသို့သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပေါင်းစပ်!
Arcane Legends Tablet နဲ့ဖုန်းတွေနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမိုဘိုင်းပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးယဉ် action ကို RPG နဲ့ MMORPG ဂိမ်းပါ! ဒီ MMO အတွက်ထောင်ထဲကမှတဆင့်စွန့်စားမှုနှင့်လူကြီးတွေဟာအဲဒီမှာရှိတယ်တိုက်ပွဲများ, ပြန်ပေးရှာတွေ့, Guilds ပူးပေါင်းနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစုဆောင်းပါ။ Spacetime Studios ကနေဒီအကြီးအကျယ်ဆုရဂိမ်းထဲမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာပါပဲဗျာ 3D ကမ္ဘာ Explore ။ စစ်မှန်သောအချိန်အတွက်အွန်လိုင်းနှင့် synchronous အခြားကစားသမားထောင်ပေါင်းများစွာ၏နဲ့အတူသင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်နှင့်ရှာပုံတော် Build ။ သငျသညျနဂါး, orcs နှင့် Arlor ၏နိုငျငံတျောကိုဖကျြဆီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခြားမကောင်းသောအတပ်ဖွဲ့များစစ်တိုက်ခြင်းအဖြစ်ကိုသင့် Quest များရဲတိုက်, သစ်တောများနှင့်ထောင်ထဲကတဆင့်သင်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုယူပါလိမ့်မယ်။
***** "စမတ်ဖုန်းများအတွက် 10 အကောင်းဆုံးဂိမ်း" - Kotaku
***** "အဖြေကို Hack & မူလစာမျက်နှာ Run ကိုလျှော့ချ" - Forbes မဂ္ဂဇင်း
***** "အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး" - MMORPG
***** "ကျနော်တို့အချိန်ကြာမြင့်စွာတွေ့မြင်ဖူးတဲ့အများဆုံးအထင်ကြီးဂိမ်းတစ်ခုမှာ" - Pocket ဂိမ်းကစားသူ
***** "သင်ရှာဖွေနိုင်သည်ကိုအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း MMORPG အတှေ့အကွုံတစ်ခုမှာ" - Touch ကိုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
***** "စုံလင်သောမိုဘိုင်းစွန့်စားမှုဂိမ်းအမျှတမေးမြန်းနိုင်ကြောင်းအဖြစ်" - နယူးဂိမ်းကစားသူ Nation
+ သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအတန်း, ကျွမ်းကျင်မှုများစွာနှင့်သင်၏သူရဲကောင်းစိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏။
+ Quest များပေါ်တွင်သင်ကူညီများ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစုဆောင်းနှင့်မပေါက်ပါဘူး။
+ အ PvE စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှာအခြားသူရဲကောင်းများနှင့်အတူပူးတွဲ op Play
+ သုံး PvP သည် Modes အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုရယူပါ: အလံ, deathmatch နှင့် duels ဖမ်းယူ!
Arcane Legends MMO-Action RPG အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Arcane Legends MMO-Action RPG အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Arcane Legends MMO-Action RPG အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Arcane Legends MMO-Action RPG အား အခ်က္ျပပါ
ryoma3ch1z3n စတိုး 2.71k 608.83k
Arcane Legends MMO-Action RPG ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Arcane Legends MMO-Action RPG အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Spacetime Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.spacetimestudios.com/content.php?384-Spacetime-Studios-Privacy-Policy
App Name: Arcane Legends MMO-Action RPG
Release date: 2019-05-23 15:11:29
လက်မှတ် SHA1: C1:12:47:ED:A0:04:44:EF:95:33:7F:AE:7C:6B:43:D8:81:B9:03:C5
အဖွဲ့အစည်း (O): Spacetime Studios
Arcane Legends MMO-Action RPG APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ